Kooxda Naadiga Siinaay Oo Taageertay Kala Bixinta Deegaanka - Ellicott Dredges Blog
Naadiga Siiriya waxa ay taageersan tahay nabaad-guurka deegaanka: hadafku waa nadiifinta wabiga Ashtabula wasakhaysan
Iskaashi aan caadi aheyn, bay'ada deegaanka, wasakheynta hawada, degmooyinka maxalliga ah iyo Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ayaa si wada jir ah uga shaqeynaya sidii loo sifeyn lahaa qoriga sunta ah ee xiraya Wabiga Ashtabula ee u dhow harada Erie.
Hadafkooda guud waa in ay bilaabaan qulqulka webiga iyada oo aan sanado badan dacwooyin la qaadin iyo daraasado la mid ah kaabisyada lagu sameeyay sharciga Superfund.
Bixiyeyaasha biraha culus iyo PCB-yada kansarka keena ayaa wasakheeyay marinka webiga.
Qodista qashinku nadiifin mayso oo keliya wasakheynta laakiin waxay qaabilaysaa taraafikada doomaha badan kanaalka qulqulaya harada Erie ee Ashtabula, oo ku taal geeska waqooyi-bari ee Ohio.
Kaliya maahan arrinta deegaanka. Waa arrin dhaqaale oo aad u culus oo ka jirta gobolkan, ”ayuu yiri John Mahan, isuduwaha Ashtabula River Partnership, oo ah dadaal wadajir ah oo ay ka qeyb qaadanayaan aqoonyahannada deegaanka, maamulayaasha, wasakheynta hawada iyo degmooyinka.
Danaha kaladuwan waxaa wada waday khibrada Fields Brook, oo ah meel durugsan oo kaabiga ku haysa sanado kahor ayaa lagu qoray liiska EPA Superfund ee dhibaatooyinka wasakhda ugu daran qaranka.
Sida goobaha kale ee Superfund, kharashyada ayaa kordhay shaqadii nadiifinta ee dhabta ahayd dib ayaa loo dhigay. Waxaa jiray heshiis la isku raacsanaa oo ay ahayd inay jirto dariiq ka wanaagsan. Ilaa hadda, iskaashigu wuu shaqeynayaa. Xilligan dayrta ayaa Koongaraalku luuqad ku daray biilka qarashka ee EPA oo kuboorinaya hay'adda inaysan soo saarin amarro dheeri ah.
Ma ahayn qasab, laakiin "isbeddelku waa mid laga walwalsan yahay," ayay tiri Emily Green, oo khabiir ku ah harooyinka waaweeyn ee xafiiska Midwest ee Sierra Club. "Haddii ay isku dayaan inay markale riixaan sanadka soo socda, runti saameyn weyn ayey ku yeelan doontaa harooyinka."
Qodista inta badan waa xulashada nadiifinta ee la door bidaayo maxaa yeelay waa mid joogto ah waxayna ka hortageysaa wasakhda inay ka sii fogaato, ayuu yiri Green.
Waxaa laga daabacay Baltimore Sun iyada oo loo marayo Associated Press